IOS मा हिज्जे परीक्षक कसरी सेट अप गर्ने आईफोन समाचार
El हिज्जे परीक्षक मोबाइल उपकरण स्वत: सुधार ती चीजहरू मध्ये एक हो जुन हामीले समान मापनमा मन पराउछौं र घृणा गर्छौं। हामी यसलाई मन पराउँदछौं किनकि यसले हामीलाई द्रुत रूपमा लेख्न र जब हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा प्रयोग गर्दछौं, व्यावहारिक रूपमा स्क्रिनमा नहेरीकन अनुमति दिन्छ। हामी उसलाई घृणा गर्दछौं किनभने कहिलेकाँही उसको आफ्नै जीवन हुन्छ र उसले राम्रो शब्दहरू लेख्छ जुन हामीले सोच्दैनौं। यद्यपि यो आधारभूत सेटिंग हो, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जुन कसरी यस लेख्ने उपकरण प्रबन्ध गर्ने बारे शंका छ।
स्वत: सुधारको साथ समस्या यो छ कि यो धेरै सहि भाषा प्रयोग गर्न कोसिस गर्दछ। थप रूपमा, आईफोन, एक राम्रो एप्पल उत्पादन हो कि यो हो, खराब शब्दहरू मनपर्दैन, त्यसैले हामीले त्यसलाई ध्यानपूर्वक लेख्नुपर्दछ यदि हामी यसलाई बिभिन्न अर्थको साथ केही पठाउन चाहँदैनौं भने। अर्कोतर्फ, यो तार्किक छ कि त्यहाँ बिभिन्न शब्दहरू उही कुरा गर्न उही भाषामा, "सानो" को मामला जस्तो कि अल्बासेटमा "सानो" भन्न प्रयोग गरिएको छ। यी अवस्थाहरूमा, यो एक राम्रो विचार हुन सक्छ सुधारकर्तालाई निष्क्रिय गर्न, एक धेरै साधारण प्रक्रिया जुन हामी तल व्याख्या गर्छौं।
1 कसरी आईफोनको हिज्जे परीक्षकलाई बन्द गर्ने
2 हिज्जे परीक्षकको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने
3 कसरी भाषा थप्ने
4 कसरी कातालान हिज्जे परीक्षकलाई सक्रिय गर्ने
5 "हिज्जे जाँच" के हो?
कसरी आईफोनको हिज्जे परीक्षकलाई बन्द गर्ने
मैले माथि भनें, स्वत: सुधार अक्षम गर्नुहोस् यो धेरै सरल छ। तर जहिले जहिले पनि तपाईले सेटि forहरू खोज्नु पर्ने वा मार्ग थाहा पाउनु पर्ने बिचार गर्नु पर्छ। हामी यी चरणहरू प्रदर्शन गरेर यसलाई निष्क्रिय गर्नेछौं।
हामी सेटिंग्स खोल्छौं।
अब हामी जनरलमा जान्छौं।
हामी तल स्लाइड र कुञ्जीपाटी प्रविष्ट गर्दछौं।
अन्त्यमा, हामीले स्विच, लीभर वा निष्क्रिय गर्न पर्छ टगल गर्नुहोस् स्वत: सुधारकर्ताको।
हिज्जे परीक्षकको भाषा कसरी परिवर्तन गर्ने
प्रूफरीडरको भाषा परिवर्तन गर्नुहोस् हिज्जे धेरै सजिलो छ, तर पहिले अर्को बिन्दुमा हेर्नु यो उचित हुन सक्छ। जे भए पनि, भाषा परिवर्तन गर्न हामीसँग दुई विकल्पहरू छन्:
हामी विश्वको बललाई छुन्छौं र भाषा एक अर्कामा परिवर्तन हुने छ (उदाहरणका लागि, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्पेनिश…)।
हामी स्पर्श गर्छौं र विश्व बल मा समेट्यौं सबै भाषाहरु जुन हामीले सँगै सक्रिय गरेका छौं भविष्यवाणी शब्दकोषलाई निस्क्रिय गर्न विकल्पको साथ।
कसरी भाषा थप्ने
हामीले अघिल्लो बिन्दुमा व्याख्या गरेझैं भाषा परिवर्तन गर्नको लागि, पहिले हामीले गर्नुपर्नेछ किबोर्डमा नयाँ भाषाहरू थप्नुहोस्। यसले निम्नको रूपमा काम गर्दछ: हामी आधारमा सुरु गर्दछौं कि हामी चाहान्छौं कि हामी हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड हामी स्पेनीमा लेखेको कुरा सच्याउन सक्षम हुन चाहन्छौं, तर त्यो जुनसुकै कारणका लागि हामी संयुक्त राज्य अंग्रेजीमा पनि यो गर्न चाहन्छौं। हामीले यस अवस्थामा गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको किबोर्ड थप्नु हो। भ्रमबाट जोगिन, म अनुसरण गर्न को लागी निम्नलिखित कुराहरुको विस्तार गर्न जाँदैछु।
स्वत: सुधारकर्तालाई निष्क्रिय गर्ने क्रममा, हामी सेटि openहरू खोल्छौं।
अर्को, हामी सामान्य मा जान्छौं।
अर्को कुरा कुञ्जीपाटी प्रविष्ट गर्नु हो। यदि तपाईंले यसलाई कहिल्यै छुनु भएको छैन भने, यसको छेउमा तपाईले २ देख्नुहुनेछ, एउटा जुन तपाईंको भाषाको किबोर्ड हो र दोस्रो यो इमोजीको हो।
अर्को हामीले नयाँ किबोर्ड थप्नुहोस् ट्याप गर्नुपर्नेछ। हामी हेर्ने छौं कि हामीसँग उपलब्ध सबै हामीलाई देखाइएको छ।
हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा, तार्किक रूपमा हामीले थप्न चाहेको भाषा छनौट गर्नुपर्दछ, जुन यस्तो अवस्थामा "अंग्रेजी" हो। यदि त्यहाँ एक छ कि युनाइटेड किंगडम को हो, केहि पनि नराख्ने एक अंग्रेजी हो जहाँ एप्पल बस्छन् को अंग्रेजी हो, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अब जब हामीसँग भाषा थपिएको छ, हामीसँग पहिले नै यो थियो, तर यो कसरी प्रयोग हुन्छ? ठिक छ, हामीले लेख्न सक्ने कुनै पनि अनुप्रयोगमा जानुपर्नेछ।
अन्त्यमा, हामीले वर्ल्ड बललाई छोएर भाषा छनौट गर्नुपर्नेछ जुन अनुहारको छेउमा देखा पर्नेछ जुन हामी इमोजीमा पहुँच गर्छौं।
कसरी कातालान हिज्जे परीक्षकलाई सक्रिय गर्ने
यो क्वेरी हो जुन तपाइँले हामीलाई सोध्नुभएको छ। कुनै खास तरीका छैन क्याटालान हिज्जे परीक्षकलाई सक्रिय गर्नुहोस्किनकि हामी इबेरियन प्रायद्वीपको आधिकारिक भाषाको बारेमा कुरा गरिरहेछौं, त्यसैले यो नै गरीरहेको छ हामी यसलाई उपलब्ध भएका धेरै भाषाहरूमा गर्छौं। तर क्वेरी एक विशिष्ट भाषाको लागि हो, यदि हामीसँग अटो-सुधारकर्ता सक्रिय गरिएको छैन भने कि यसले क्याटालान शब्दहरू सच्याउँदैन, हामीले अघिल्लो बिन्दुहरूमा वर्णन गरिएका सबै कुरालाई एकजुट गर्नुपर्‍यो:
यदि हामीसँग यो सक्रिय गरिएको छैन भने, तार्किक रूपमा हामीले स्वत: सुधार गर्नुपर्दछ जुन हामीले पहिले वर्णन गरिसक्यौं।
मैले अघिल्लो विन्दुमा वर्णन गरेको कुरा गर्छौं, तर मात्र भाषा छनौट गर्ने चरण परिवर्तन गर्ने, जुन बिन्दुमा तार्किक रूपमा हामी "कातालान" खोज्नेछौं र यसलाई थप्नेछौं।
अन्तमा, हामी विश्वको बलमा खेल्नेछौं र «कातालान choose छनौट गर्नेछौं। यदि हामीले विश्वको बललाई यो नराखीकन छोयौं भने, यो भाषाहरू बीच परिवर्तन हुन्छ र हामी जान्छौं कि यो क्याटालान पुगेको छ जब «कातालान the स्पेस पट्टीमा देखा पर्दछ (केहि सेकेन्ड पछि देखा पर्दछ)।
"हिज्जे जाँच" के हो?
पूर्वनिर्धारित रूपमा, सबै आईओएस उपकरणहरू दुबै स्वत: सुधार र स्वत: सुधार सक्षम पारिएको छ। हिज्जे जाँच। यस तरिकाले, जब हामी गलत शब्द लेख्न गइरहेका छौं, यदि यसले यसको शब्दकोशमा मिल्दछ भने फेला पारेमा, यो हाम्रो लागि स्वतः परिवर्तन हुनेछ। तर यदि, उदाहरण को लागी, हामी उद्देश्यमा गलत हिज्जे शब्द राख्न चाहान्छौं, हामी यो सुझाव गरीएको शब्दको छेउमा देखा पर्ने "x" थिचेर गर्न सक्छौं, जसले हामीलाई लेखेको शब्द छोड्न दिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि हामी "vurro" शब्द राख्छौं (तपाईं जो अहिले रगत रोइरहेका छ माफ गर्नुहोस्) र हामीले "x" मा हिर्कायौं भने, यो लेखन बाकसमा तल रातो रेखा सहित देखा पर्नेछ।
विकल्पहरू अलग गरिएको छ यदि हामी यसलाई गर्न चाहन्छौं किनकि यो सामान्यतया कम्प्युटरहरूमा हुन्छ। कम्प्युटरहरूमा जहाँ हामी ठूलो कुञ्जीपाटी र अधिक सान्त्वनाका साथ लेख्न सक्दछौं, मलाई लाग्छ कि हामी के लेख्छौं भनेर लेख्न जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ र हामी सम्भावित त्रुटिहरूको चेतावनी दिनुहोस्, तर हाम्रो लागि शब्द परिवर्तन नगर्नुहोस्। वास्तवमा, म यसलाई लामो समय अगाडि म्याकमा परीक्षण गर्दै थिएँ र "ड्रप सिम्युलेटर" टाइप गरें जब म "बाख्रा सिम्युलेटर" टाइप गर्न चाहन्थें। यद्यपि तिनीहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा सक्रिय छन्, विकल्पहरू अलग छन् ताकि हामी कुन प्रकारको मद्दत चाहन्छौं भनेर निर्णय गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » IOS मा हिज्जे परीक्षक कसरी सेट अप गर्ने
एलेना फेरेरा भन्यो
म के चाहन्छु हिज्जे परीक्षकले मलाई मलाई नभन्नुहोस्। कसैलाई थाहा छ कि म यसलाई कसरी मौन बनाउँछु?
एलेना फेरेरालाई जवाफ दिनुहोस्
यो मेरो लागि ठूलो सोच्न को लागी एकदम असहज हुन्छ (विशेष गरी यदि कसैले चुपचाप अगाडि कार्यालयमा टाइप गर्न को लागी कोशिश गर्दछ), त्यसैले मैले छनौट गर्नु परेको छ: १) हिज्जे परीक्षकको बाहिर चलाउनुहोस् (धेरै असजिलो) २) सम्पूर्ण मौन फोन (अझै धेरै असजिलो)। यस विषयको साथ मलाई केही समयको लागि मद्दत गर्न म वेबमा ट्यूटोरियल खोज्दै छु, तर म फेला पार्न सक्दिन :(।
मैले मेरो कम्प्युटर वा पीसीमा वुसार स्थापना गरेको छु, म कसरी स्थापना गर्ने भनेर जान्न चाहन्छु:
म कसरी एक wuasar फाईललाई नयाँ साथी वा धेरै साथीहरूलाई पठाउन सक्दछु, तिनीहरूलाई समूहमा बिना नै
मैले परीक्षकको शब्दहरूको पहुँच र सम्पादन गर्न सम्भावित तरीका फेला पार्न सकिन।
यसलाई राख्न / यसलाई राख्नको लागि मात्र सम्भव छ।
र थपिएको रद्द गर्नुहोस्।
तर म कुनै तरिका देख्न सक्दिन म जिद्दी बकवास सुझाव दिन्छु
शब्दहरू लाइबर्ट्याड र ला पाज जहिले पनि उचित नामहरूको रूपमा
एप्पल अप्रिल २ its मा यसको त्रैमासिक ब्यालेन्स प्रस्तुत गर्दछ
आईआईओएसका लागि निन्टेन्डोको पहिलो खेल, मिइटोमो मार्च on१ मा अधिक देशहरूमा आईपुग्नेछ